China Inkqubo yoLawulo lweeNkqutyana eziKrelekrele A-180E Ngefektri yesinxibelelanisi se-USB kunye nabathengisi | Indawo yokuhlala
Igama lemveliso: Inkqubo yoLawulo oluphambili
Imodyuli yeMveliso: A-180E
Ubukhulu: 500mm × 400mm × 180mm
Iqonga leNkqubo: I-Android
ICPU: I-4-core ARM Cortex TM-A7, itshixiwe kwi-1.2GHz
Isikrini: 7 "umbono opheleleyo wokuchukumisa isikrini
Amandla eMemori: Umgangatho we-1GB RAM + 8GB ROM
Ukunikezwa amandla: 220V
Ubushushu Working: 2-40 ℃
* I-18 eyandisiweyo, eyomeleleyo, yobomi obude be-iFobs enamakhonkco akhuselekileyo kunye neethegi zeRFID
* Akukho tywina longezelelweyo phakathi kwesitshixo kunye nefob efunekayo
* Abasebenzisi abanikezwe ukufikelela kwizitshixo ezithile, abalawuli balawula abasemagunyeni abaphambili njengokubhalisa abasebenzisi kunye nokunikezela ukufikelela
* Ingxelo yomnyhadala
* Ukutyikitywa kokungabikho kweqhosha ixesha elide
Ukusebenza kweelwimi ezininzi
* Iscreen sokuchukumisa i-Android kunye nenkqubo yokudibanisa uphicotho, ukulandela umkhondo kunye nokunika ingxelo ngamaqhosha okanye amaqhosha apho iingxelo zithunyelwa ngaphandle ngesidibanisi se-USB
* Ialam ekhawulezileyo kuyo nayiphi na into engafanelekanga ukuthatha okanye ukubuya, ngesilumkiso esibomvu ukukhanya kwe-LED kwiindawo ezinamaqhosha kunye nesandi;
* Ukukhululwa kweqhosha likaxakeka
* Ubhaqo lokuvula umnyango
* Iphaneli yokulawula ubambe 7 ”
LANDWELL Inkqubo yoLawulo oluPhambili oluPhambili ibonelela ngokugqibeleleyo kwenani elikhulu lezitshixo kunye nexabiso elincinci lenkampani yakho.
Abasebenzisi abagunyazisiweyo kuphela abanokufikelela kwizitshixo ngoseto lwegunya. Ngaphezu koko, abasebenzisi abagunyazisiweyo bazichaza (ngaphakathi kwexesha elithile) ngekhadi lomsebenzisi, iphasiwedi kunye neminwe yeminwe kwiUMHLABA Indawo yokukhwelela. Zonke iinkcukacha ezinje ngokuthatha nokubuyisa izitshixo ziya kujongwa ngokupheleleyo kwiingxelo ezahlukeneyo.
Uqinisekiso olwahlukileyo lweminwe emininzi
I-RFID ephambili eyaziwayo eyaziwayo, iyenza izenzekele ngokupheleleyo
Iglasi ye-PMMA okanye ucango olungenantsimbi ukwenza amaqhosha akhuseleke ngakumbi
Sebenzisa ii-CPU ezininzi ezizimeleyo kunye neFlash, yenza ukuthatha kunye nokubuyisa amaqhosha kube lula ngakumbi
Umkhondo okhethekileyo ozenzekelayo
Amaqhosha aphantsi kolawulo ngehardware kunye nesoftware
Idityaniswe nenkqubo ezininzi zokulawula ukufikelela
Libala apho ishiyeke khona isitshixo?
Izitshixo zomgcini zisemsebenzini okanye akunjalo?
Ukudideka ngezitshixo zomsebenzisi?
Thatha izitshixo ngempazamo xa usiya emsebenzini.
Ngaba usasebenzisa iindlela zolawulo lwemveli ngokusayina ukuthatha okanye ukubuyisa izitshixo ngexesha lomsebenzi wakho?
Yenza izitshixo zakho kunye neeasethi zikhuseleke ekusebenziseni kwakho
Khusela izitshixo zakho kunye neeasethi
Inkqubo yethu yolawulo olusisiseko inokuqinisekisa ukhuseleko lweeasethi zomsebenzisi, ezingenakusetyenziswa ngaphandle kwemvume.
☆ Ulawulo lokufikelela
Inokuthatha isigqibo sokuba ngubani onokusebenzisa iiasethi ngexesha elithile.
Yonke imisebenzi ibhaliwe kwaye umsebenzisi uthatha uxanduva lokhuseleko lweeasethi.
☆ Ukunciphisa ixesha lokonakala
Gcina izitshixo apho uzifuna kakhulu, kwaye uzithathe nanini na, naphi na
☆ Ukuqokelelwa kwedatha ebalulekileyo
Ulwazi lokusetyenziswa lorekhodwa kumsebenzisi ngamnye kunye neeasethi, kwaye kuveliswa ingxelo yeeasethi ezixabisekileyo.
☆ Ukukhawulezisa uphuhliso
Inokunciphisa iindleko zolawulo kunye nokubonelela ngolawulo olufanelekileyo kwiinkqubo ezibalulekileyo.
Egqithileyo I-H2000 yeNethiwekhi yokuKhangela kwiKhabhinethi
Okulandelayo: I-keybox-8 Ibhokisi encinci enesistim yoLawulo kunye nesitshixo
Ifayile yeKhabhinethi yoGcino oluPhambili
Isitshixo seKhabhinethi yokuGcina
IKhabhinethi eyiNtloko eSmart
Landwell ibhokisi yezitshixo ekrelekrele ukhuseleko phezulu manag ...
IKhabhinethi eKhulu yokuGcina, IKhabinethi ephambili etshixwayo, Ibhokisi yoKhiye woLawulo, Ibhokisi ephambili ejingayo, Inkqubo yoLawulo lwebhokisi encinci kunye nesitshixo, IKhabhinethi Yolawulo Oluphambili,